6 Fikrado Ganacsiga Yar-yar ee Qofkasta oo Doonaya inuu Bilaabo Ganacsi | Afrikaan I Saldhiga xalka caqabadaha
Mustafe Cabdillaahi Cismaan, October 20, 2020
Cabdijabaar Sh. Axmed — October 9, 2020
In kasta oo kala duwanaanshaha u dhexeeya waddammada uu yahay mid xiiso leh, hadana sababaha keena in dad badan ay ganacsi bilaabaan ayaa ah, waxay rabaan inay lacag sameeyaan. Dabcan, lacagta ma’ahan wax walba, sidaa darteed ma aha hantida kaliya dhiirrigelinta ay leeyihiin ganacsatada.
Dadka qaar waxaa ka guuxaayo fikrado ganacsi, qaarna waxaad u malaynaysaa in loogu talagalay inay noqdaan ganacsato. Laga soo bilaabo marka ay ka soo gudbeen iskuulka, ama laga yaabee xitaa intaas ka hor, waxay u gaajaysan yihiin inay bilaabaan ganacsi oo ay u horseedaan guul la taaban karo.
Dadka kale qaarkiis, bilaabida ganacsi waxay u tahay cabsi, waxay leeyihiin fikrado cabsi xambaarsan. Laakiin haddii aad ka fikireyso inaad noqoto ganacsade, ha iloobin dhammaan faa’iidooyinka ay leedahay inaad ganacsi bilawdo. Haddii aad fiiriso sababaha ugu caansan ee loo abuuro ganacsi waa inaad leedahay fikrad ganacsi oo kuu gaar ah.
Laakiin ganacsi kasta illaahay swc uma qoondaynin inuu guuleysto. Xaqiiqdii, kaliya seddex meelood laba meel ganacsiyada shaqaalaha leh waxay badbaadaan ugu yaraan laba sano, kala barna waxay badbaadaan shan sano. Marka waxaa laga yaabaa inaad kujirto loolan dhab ah oo adag lagaagana baahan yahay inaad la imaado fikrado iyo dedaal xoogan si aad u guulaysato.
Marka hore waa inaad dejisaa qorshe bilow ah illaa iyo guusha dhabta ah halka ay kugu sugayso. Marxaladdaan ayaa badanaa la dejiyaa ganacsiga marka uu bilow yahay, inaad raacdo dhammaan tallaabooyinka lagama maarmaanka ah markaad bilaabeysid ganacsigaaga ayaa aasaas u noqon kara guusha.
Hadaba, diyaar ma u tahay inaad wax ka barato fikradahaan ganacsi ee soo socda?
Khabiir maku tahay dhar tolista?
Dadka had iyo jeer waxay u baahan yihiin dhar cufan oo batamada la hagaajiyey – adigana waxaad noqon kartaa qof dadka u talo nooca dhar ee ay rabaan. Haddii aad jeceshahay tolidda, ku billow inaad siiso addeegyo fudud sida inaad u tasho meelaha dharka ka dilaacay ama jeexjeexmay iyo naqshadeynta markaad dhiseyso saldhig macaamiil iyo dalab.
Shaqadaan haddii aadan aqoon-duruqsan u lahayn waxaa jira machadyo iyo jaamacado bixiyo shahaadooyinka sare ee naqshadeynta iyo qurxinta dharka. Waxaa jira illaa heer darajada labaad ee jaamacada. Waxay ku saleysan yihiin halbeegyada tayada, waxayna u furan yihiin qof kasta oo ganacsi tolida la xiriira. Tusaalle halkaan ayaad ka heli kartaa https://sewingcertification.com/
Horumariye madax banaan
Soo-saarayaasha madaxa banaan ee softiweerada ayaa ah dad iskood u madaxbanaan halkii uu ka ahaan lahaa shaqaale. Badanaa waa lasoo kaxaystaa si ay u gutaan waajibaadkooda xirfadeed. Waxyaabaha ay kaga fiican yihiin shaqaalaha shirkadaha waxay kuu sheegayaan hawsha inta maalmood ay qaadanayso, saacada iyo maalinta ay dhammaan doonto shaqada. Waxay kaloo xoogga saaraan inay macamiilkooda farxad geliyaan si markale loo soo dalbado.
Hawlaha aad qaban karto waxaa kamid ah, laga soo bilaabo dhisida degellada (websayd) ganacsiyada kale ee yar yar ilaa bixinta taageero farsamo ee mashaariicda qaarkood. Horumarinta websayd-yada oo tayo leh ayaa hadda baahi weyn loo qabaa iyada oo la adeegsanayo xirfadaha farsamo ee noocan oo kale ah, hubi inaad ku sharixi karto waxaad qabato iyo sida aad u qaban doonto, kuna diyaari luuqad si fudud loo fahmi karo. Si fiican u gaarsii fariintaada asxaabta iyo qoyskaaga oo aan si fiican u fahmin shaqada aad qabato.
Naqshadeeye sawir gacmeedka
Samee saacado kuu gaar ah, dooro mashaariicdaada, oo dhis boortofoolyo iyo ganacsi aad ku faaneyso. Laga soo bilaabo naqshadeynta websaydka illaa naqshadeynta baloogyada iyo inbadan, shirkado badani waxay raadiyaan naqshadeeyayaal qaab-dhismeed khibrad u leh dhammaan noocyada mashaariicda.
Sidee isku tihiin sida CV-yada loo diyaariyo?
Waa fursad qaali ah haddii aad ku fiican tahay sida loo sameeyo CV-yada (warqada codsiga shaqooyinka). Waxaa jira dad badan oo shaqo raadis ah hadana aanan aqoon fiican u lahayn sida CV-yada iyo warqada codsiga boosaska shaqo aanan aqoonin. Waxaad isbari kartaa asxaabtaada adigoo malab-ismarinaayo oo u sheegaayo inaad hawshaas ku fiican tahay adigoo tusaayo caddeymo kala duwan oo wada qurux badan. Halkaan ka akhriso farqiga u dhaxeeyo warqada codsiga shaqo iyo CV-ga.
Haddii aad si fiican u garaneyso wax ka badan hal luuqad oo aad ka turjumi karto hal luuqad, waxaad furan kartaa ganacsi yar oo bixiya adeegyada turjumaan oo kuu noqon kara ganacsi yar oo adiga kugu habboon. Marka hore sii ogaaw waxa aad u baahan tahay inaad ogaato ka hor intaadan go’aansan haddii fikraddan ganacsi ay kugu habboon tahay adiga.
Ganacsiga dukaameysyada internetka
Waa fursad weyn oo suuqgeynta iyo iibinta alaabooyinka. Haddii aad doorato inaad abuurto wax soo saar kuu gaar ah, la shaqee jumladleyda jumlada si aad u hesho agab, ama aad aado dariiqa daadinta, waxaad dhisi kartaa ganacsi guuleysta oo ka baxsan suuqgeynta weyn.
Xilliyadaan waqtiyadu waa is beddeleen. Ganacsiga dukaameeysyada internetka ayaa si xawli ah ugu socda dunidda oo dhan. Waxaana jira fursado badan oo aan wali laga faa’idaysan gaar ahaan qaarada Afrika.
Waxaan rajeyneynaa, maqaalkaan inuu kaa caawiyay inaad halkaan ka heshay fursado ganacsi ee aad u baahneed. Waa iga dedaal iyo in aan ka caajiso in bulshadeyda aan wax usoo gudbin waayo. Akhristaha sharafta leh waxaan kuu rajeynayaa guul waarta, waxaana kaaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
Tags: 6 Fikrado Ganacsiga Yar-yar ee Qofkasta oo Doonaya inuu Bilaabo Ganacsi
Next post Maxay Kala Yihiin Wadamada Iskandaneefiyanka 'Scandinavian'?
Previous post 5 Arrimood oo Sabab u Ah in Dhimashada Korona ay Ku Yaraato Afrika
Cabdijabaar waa qoraa iyo tifatiraha guud ee majalada Afrikaan.so Wuxuu wax ka qoraa maamulka, dhaqaalaha, falsafada, falanqeynta siyaasadda iyo diblomasiyada, horumarka bulshada iyo nabadgelyadda. Qoraaga waa qoraa dhawaanahan qoray buuggaag iyo qoraallo kala duwan oo aan dhanka wax tarka kala dhicin.